Opportuno - イタリア語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: opportuno (イタリア語 - ビルマ語)
ထိုသို့သော တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည် အချိန် တန်လျှင် အစာကျွေးတော်မူစေခြင်းငှါ၊ ကိုယ်တော်ကို မြော်လင့်လျက် နေကြပါ၏။
ထိုကြောင့် ကာလအချိန်တန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်း၊ တန်ခိုးကြီသော လက်တော်အောက်၌ ကိုယ်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချကြလော့။
M'è parso opportuno rendervi noti i prodigiele meraviglie che il Dio altissimo ha fatto per me
မြင့်မြတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ငါ၌ ပြုတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို ပြခြင်းငှါ ငါအလိုရှိ၏။
Farò di loroedelle regioni attorno al mio colle una benedizione: manderò la pioggiaatempo opportunoesarà pioggia di benedizione
သူတို့ကို၎င်း၊ ငါ၏တောင်တော်ပတ်လည်၌ ရှိသော အရပ်တို့ကို၎င်း ငါကောင်းကြီးပေး၍၊ အချိန်တန် လျှင် မိုဃ်းကိုရွာစေသဖြင့်၊ ကောင်းကြီးမိုးရေ ကျရ လိမ့်မည်။
နံနက်စောစော နေထွက်စကထ၍ ညဉ့်အခါ ကိုယ်တော်သည် ပါသောသူတို့နှင့်တကွ ထ၍ မြို့ကို တိုက်တော်မူပါ။ ဂါလသည် သူ၌ပါသော လူတို့နှင့်တကွ ဆီး၍ ကြိုသောအခါ၊ အဆင်သင့်သည်အတိုင်း ပြုတော်မူပါဟု ကြားလျှောက်လေ။
Il modulo per il caricamento delle immagini «%s» non esporta l'interfaccia opportuna, forse appartieneauna versione differente di gdk-pixbuf.
ရုပ်ပုံ-ဖွင့်ပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း %s က သင့်တော်တဲ့ ကြားခံမြင်ကွင်းကို မတင်ပို့​ဘူး၊ ခြားနားတဲ့ GTK မူအဆင့်​ တခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ပြောလော့။ အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်လော့။ အပြစ်ကိုဘော်ပြလော့။ ဆုံးမခြင်းကိုပြုလော့။ အလွန်ရှည်သောစိတ်နှင့် ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍ တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့။
ထိုသူတို့သည် ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိ၍ ငွေပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။ ထိုနောက် အဆင်သင့် သောအချိန်ကာလ၌ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့အပ်ရမည်နည်းဟု ရှာကြံလျက်နေ၏။
Ma rispose Mosè: «Non è opportuno far così perché quello che noi sacrifichiamo al Signore, nostro Dio, è abominio per gli Egiziani. Se noi facciamo un sacrificio abominevole agli Egiziani sotto i loro occhi, forse non ci lapideranno
ငါသည် မြေကြီးအလယ်၌ ထာဝရဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကို သင်သိစေခြင်းငှါ ငါ၏လူတို့နေရာ ဂေါရှင်ပြည်ကို ထိုနေ့၌ ငါခြားနားစေ၍၊ ထိုပြည်၌ ယင်ရဲမရှိရ။
vosotros estais (スペイン語>スワヒリ語)普里兹克奖对于我来说有点早了 (簡体字中国語>フランス語)counterfactuals (英語>ギリシア語)lagen (イタリア語>ドイツ語)bf muvi video (ヒンズー語>英語)rook (オランダ語>フランス語)fiendar (ノルウェー語>カタロニア語)vendosmërinë (アルバニア語>英語)ujian allah (マレー語>英語)lt (フィンランド語>オランダ語)sateenkaaripainatus (フィンランド語>英語)replaced (スウェーデン語>日本語)wees (アフリカーンス語>コプト語)在上个星期三 (簡体字中国語>タイ語)tuloy ba ba ang iyong pag alis (タガログ語>英語)grizma ta l isqof (マルタ語>英語)stl (イタリア語>英語)doen van aangifte (オランダ語>英語)ايت (アラビア語>マレー語)ich habe ein hund eine katze und kaninchen (ドイツ語>英語)recovered (英語>タガログ語)gorusuruz (トルコ語>オランダ語)taiawhio (マオリ語>ロシア語)centymetry (ポーランド語>ロシア語)muh mitha karna chahiye (ヒンズー語>英語)